Zeldin Mikhail Leonidovich - ummeli kusukela Ekaterinburg, okuyinto, sibonga efaneleyo yayo kanye nomthwalo wemfanelo e idumela esizifanele wokuba omunye ochwepheshe best emkhakheni wemisebenzi yezomthetho. Iningi amacala lowo muntu esithathwayo, ukuqeda kahle ukuze amakhastama akuthokozele. Akukhona yini lokhu inkomba ngekhono? Ake uthole kabanzi, lokho kuyinto Michael Zeldin. Biography yale ndoda Sizoxoxa yokutadisha kwethu.
Zeldin Mikhail Leonidovich wazalwa sokuqondisa omunye ezifundeni RSFSR - emzini Sverdlovsk (manje eYekaterinburg) ngo-1978 emkhayeni wamaJuda. Khona-ke kwaba okuyidolobha zezimboni, okuvulela nemibono eminingi ethakazelisayo emikhakheni ehlukahlukene. Nokho, lesi simo namanje owandile.
Ngokushesha Mikhail Zeldin labetibambile esikoleni. Vele kule minyaka esikoleni, okungukuthi ngo-1991, ezweni kukhona ngenqubo kwaholela ekuweni USSR. Sverdlovsk baphindela igama layo yendabuko - Ekaterinburg.
Lapho efunda esikoleni esiphakeme, Mike waya ukufundelwa ngo Akhethekile Sikhungo futhi Scientific Centre ye Ural State University, okuyinto iziqephu isakhi Ural State University iqanjwe Gorky. Kwaba wezemfundo esigabeni eliphakeme, esihlinzeka imfundo umnyuziki yesibili nge e Ukulifunda ngijule ezinye izifundo. It is zihlukaniswa indlela atypical ukuba abafundela, kodwa ngaso sonke isikhathi uyaphuma phezu ku ahlukahlukene imincintiswano inter-esikoleni nezilinganiso Russian. Ngakho-ke, singasho ngokuqiniseka ukuthi ummeli esizayo owaziwa atholwe kuningi yolwazi ezibalulekile.
Isikole Mikhail Zeldin, laqedwa ngo-1995, futhi ngokushesha yaphakamisa umbuzo wokuthi kulokho esikoleni futhi yini okukhethekile nemfundo ukuqhubeka phambili. Lezi zikhathi zazinzima ukuze ushintsho Russian ezombusazwe, lapho izinga lokuphila ayiyinhle, ngakho uzokhetha yomsebenzi kwaba isibili ezibalulekile.
Nokho, isikhathi eside ukucabanga Misha kwaba akudingekile. Kodwa lokhu isikole Usu akazange ashade, nakuba njengoba iziqu isikhungo ezikhethekile Zeldin zaziphinde zibe nelungelo ukungena eyunivesithi ngokubona imiphumela ukuhlolwa kokugcina. Ngaleso sikhathi, omunye ethandwa kakhulu kwaba isiqondiso sezomthetho, futhi kungathi abameli phakathi kwezihlobo. Ngakho-ke, lo mgudu usephendukele noMichael Zeldin.
Kanti yena iphothulile ngempumelelo Ural Law Institute Wezangaphakathi futhi Ural State Law Academy (manje University Ural State Law Academy). Womabili la maqembu kukhona ohlonishwa kakhulu ukufunda emkhakheni wokuqulwa kwamacala ezinkantolo.
MIA Institute yasungulwa ngo 1961 njengoba Ephakeme Amaphoyisa School. Ngo-1979 kwaba igatsha Police Academy.
UrGYuA kuyinto ngisho umlando Uyakhazimula. Isungulwe le nyuvesi kwaba emuva ngo-1918 njengoba Faculty of Law, owayeyilungu le-Irkutsk State University. Ngo-1931, uMnyango siguqulelwa laseSiberia Institute Yomthetho. Ngo-1934 wathuthela sase-Irkutsk Ekaterinburg amanje nawesikhathi ngo-1936 wamukela igama Sverdlovsk Law Institute. Ngisho ngemva kokuwa zase-USSR, ngo-1992, lesi sikhungo semfundo ephakeme ithola igama Ural Academy of Law, futhi ngo-2014 wathola isimo enyuvesi. Lesi sikole nifundiswa ezifana jurists ovelele njengoba Gofman S. M., Kursanov GA, Orlov R. P.
Yiqiniso, ukutadisha lezi amanyuvesi, Mikhail Zeldin lithole high kakhulu imfundo zomthetho. Ngaphezu izifundo Wamphatha sina kakhulu futhi ngokholo okuhle, futhi ngenxa yalokho sasibhekwa omunye wabafundi engcono.
Izinyathelo lokuqala ensimini okhokhelwayo
Zeldin Mihail umthetho umkhuba baba ukuthi baphume, namanje ukufunda eyunivesithi. Experience in iphrofayli asafuna ngo-1998, nakuba ngaleso sikhathi futhi wayengumfundi wesazi ngesikhathi esifanayo.
Ngaphezu kwalokho, Mikhail Zeldin bathola okuhlangenwe nakho emsebenzini okuphenya, njengoba ngemva kokuthweswa iziqu wasebenza Wezangaphakathi. Lokhu okuhlangenwe nakho iyoba wusizo kuye esikhathini esizayo, njengoba ummeli.
Ngokuhamba kwesikhathi futhi iminyaka okwandisa yesevisi Mihailu Zeldinu weza isipiliyoni kanye nobuchwepheshe. Ngo-2002, wamukela isimo ekamelweni ummeli ummeli we Sverdlovsk esifundeni, eyisilinganiso ukuqeqeshwa zomthetho okusezingeni eliphezulu. Inkathi nokumela, lapho Mikhail Leonidovich bathathwa amacala eyinkimbinkimbi obuhlukahlukene emkhakheni komthetho ophathelene nokwelelesa, civil kanye nezokuphatha.
Kodwa Zeldin Mihail azigcini nje lapho. Yena umuntu olokhu ezama ukuthuthukisa. Yingakho kusukela 2007 kuya 2008 afundiswe Russian Academy of Advocacy, ngokusekelwe e Moscow, ethuthukisa amakhono abo professional.
Ngaphezu kwalokho, iba ngumxhumanisi we-Institute on uhlelo "okusha Yemfihlo izidakamizwa" kwamalungelo wobuntu, kanye ilungu Chamber of Tax Consultants eMoscow.
Kuvulwa ihhovisi ayo
Isinyathelo esilandelayo kwaba kuvulwa Mihaila Zeldina ezikhundleni zabo ngokugcwele izisebenzi ezikhokhelwayo. Lokhu kwaba isinyathelo esisha emsebenzini wakhe. Manje Zeldin uzibuse kusukela ezahlukahlukene zangaphandle, uye wadala amathuba amasha ukwandisa ikhasimende yayo base nokuphathwa ibhizinisi ngcono nakakhulu.
Futhi ngokushesha, Mikhail Leonidovich abaningana babona imiphumela emihle ukuziqalela amabhizinisi abo agcwele. kwatheleka Ukwandiswa amakhasimende, futhi sibonga abasebenzi umsizi ummeli kungathatha amacala ngaphezulu futhi ukuphenya kubo ngokuphelele.
Mikhail Zeldin - ummeli owayengumnikazi okwamanje ayiswe ukusebenza ezimweni ikakhulukazi oyisazi lobugebengu. Kodwa uma amaklayenti ebhekisela angathwala umangalelwa nofana umangali zombango noma zokuphatha. Ngesikhathi esifanayo ukulungele ukuqala "umdlalo" kunoma yisiphi isigaba ekuqhutshweni: owandulela ukuqulwa kwecala uphenyo, Isivivinyo, izikhalazo post-Isivivinyo nezicelo odluliselwa umbuso lokuyekethisa yeziboshwa noma ngoshwele.
Isici Mihaila Zeldina umsebenzi ehhovisi wukuthi ayivele wokusebenzisa izinto uphenyo ukuvikela amakhasimende, kodwa futhi baqhuba uphenyo ayo eMthethweni ukuze uthole tesimongcondvo ubufakazi okwakuyosiza ekuvikelweni izigceme. Mikhail Leonidovich iphinda isebenzise zonke izinhlobo izindlela kuzuzwe umphumela omuhle yezomthetho, ezingalotshwanga ngokucacile kunqatshelwe ngokomthetho. Uma kudingekile, ummeli usungula ukuxhumana nge amaphoyisa aqapha, abacubunguli mabhuku, ochwepheshe ngobuchwepheshe kanye abasebenzi abaqhamuka kwezinye izindawo umsebenzi.
Mikhail Zeldin iqinisekisa ubumfihlo kanye ubumfihlo bokwaziswa enikeziwe kumakhasimende, ngokuvumelana nemithetho nokuziphatha ngokomthetho.
Kwezinye izimo, ihhovisi Zeldin inikeza ngamasevisi mahhala.
Phakathi ngokunqoba professional Mikhail Zeldin kufanele kuphawulwe ekunqanyulweni kwe amacala obugebengu kwamacala abucayi, ikakhulukazi ngamacala okuphanga, kanye amacala mnogoepizodnym ezifana ukukhwabanisa.
Ngaphezu kwalokho, inombolo irekhodi amacala ummeli-Iphrofayela, okuyinto ngesikhathi esisodwa ehlakazeke kakhulu abezindaba. Ingxenye enkulu phakathi iwine kunjalo izimo ezihlobene ukudayiswa izidakamizwa. Kwabaningi babo, Mikhail Leonidovich wakwazi ukufinyelela yicala noma isinqumo salowo isijeziso ziphathwa ngesandla esithambile. Zonke kuzo zonke izimo ezingaphezu kuka-150 Zeldin iwine. Kufeza indima ebalulekile kanye neqiniso lokuthi ngesikhathi esebenza Wezangaphakathi ungase iziphathimandla Zeldin ukuhlola uhlelo kusuka ngaphakathi bese uxhumano kuyadingeka ukuze isebenze.
Ikhanga Mikhail Zeldin usizo kungaba ngesikhathi indawo yehhovisi lakhe. It ikhona emzini eYekaterinburg emgwaqeni onguthelawayeka laseSiberia, 12, ukwakha 1A. Ngaphambili, Mikhail Zeldin wathatha amakhasimende kulowo muzi, kodwa ngezinye Calle u- Rosa Luxemburg, 49, ihhovisi 1006.
Ngaphezu kwalokho, ihhovisi Zeldin kungaxhunywana ngocingo: +7 (343) 268-66-00 kanye + 7-902-870-04-15. Ummeli has website yayo siqu kanye namakhasi professional ekuxhumaneni nomphakathi.
Ngokuqinisekile ungomunye wabantu odume kunabo bonke izinsizakalo zomthetho e eYekaterinburg, ummeli Zeldin Mihail Leonidovich. impendulo kwamakhasimende kuzosiza ukwakha umbono ngaye njengomahluleli ongenamizwa okhokhelwayo.
Kodwa-ke kufanele kuqashelwe ukuthi, sengathi wonke umuntu ophumelelayo, Mikhail Zeldin izitha eziningi kanye izimbangi, ngakho zonke izimenywa kufanele luphathwe ukwabelana zaba namandla kakhulu.
Izibuyekezo Iningi ku Zeldin umsebenzi ehhovisi has a omuhle ngokucacile. Ikakhulu, amathuluzi asetshenziswayo ubheke bomsebenzi kanye ehhovisi ikhanda ukuhambisana Silinganisa izinga izinsizakalo zomthetho.
Ngesikhathi esifanayo ukubuyekeza ahlukene abanye abantu, limelela amaklayenti Zeldin, ngokucijile wawugxeka. Bathi ukuxoxa izindleko uhlasela eliphezulu namasevisi ummeli for every little thing noma ingxoxo yocingo kudinga inkokhelo. Futhi waveza umbono wokuthi Zeldin cishe wahlanganyela izindaba, wabavumela ukuba athathe inkambo yabo, kodwa umsebenzi kudinga imali, okuyinto, empeleni kuyinto ukukhwabanisa. Ngokusho laba bantu, ngomfanekiso wakhe njengoba ifomu professional ngaphezulu ngokusebenzisa ukukhangisa kuka izinkomba langempela. Kukhona nalabo amaklayenti ngubani bammangalele ka zokugwazela komthetho futhi iziphathimandla zokwahlulela.
Kanjani ukukholelwa ngempendulo emihle nemibi - indaba yakho wedwa ngayinye iklayenti ezingaba khona. Kodwa akulona njalo kungenzeka ukuhlukanisa kusukela real custom isibuyekezo. Zonke kakhulu ngenxa ekuqedeni izimbangi kusukela kumasevisi emakethe abaphikisi ukulungele izimali Izibuyekezo emibi kunayo yonke. Futhi ngeke sikwazi ukubeka eceleni ngokuphelele kungenzeka ukuthi ezinye okubuyayo ezivela kumakhasimende kungenziwa ikhokhwe ukukhangisa, okuyinto Wayala Mikhail Leonidovich. Nokho, into kuphela lokho kufanele kuphawulwe Kuyaphawuleka ukuthi okubuyayo kakhulu BUSA ezimbi, okuyinto ebonisa eziqondile.
Ezokungcebeleka isikhundla emphakathini
Namanje ukuphila Mihaila Zeldina - kuyinto hhayi kuphela umsebenzi okhokhelwayo. Uphinde esebenzayo football fan.
Omunye imizamo yayo emphakathini - sokuba amaholo kubanjwa Russian football phiko. Ngokusho kwakhe, kanye football ongoti abaningi, kuzobalwa kuphela ukuzuza ukuthuthukiswa football yasekhaya.
Kodwa kanjani izinto zemikhaya Mikhail Zeldin? Okwamanje, kodwa iqiniso liwukuthi akayikhokhi washada. Nakuba akholelwa ukuthi ukuphila komkhaya kungaphazamisa imisebenzi okhokhelwayo. Nokho, isikhathi ukwakha umkhaya Mikhail Leonidovich khona, njengoba ayesengumuntu esemancane.
Okwamanje, emsebenzini main kunikezwa Mikhail Zeldin. Izingane zayo kuphela izinhlelo.
A namesake owaziwa
Ngokuvamile, ukuzwa igama ummeli Mikhail Zeldin, abantu bacabanga omunye umuntu. Them umqondisi kanye umnikazi iqembu izinkampani "Avers". Le nkampani ukwenza ukuhlolwa nokuhlola. Ikakhulukazi, it is ahlola isimo impahla ukudayiswa kwalo futhi azimele.
Kufanele kuqashelwe ukuthi kudala njengoba 2013 e izenzo zenkohlakalo osolwa Mikhail Zeldin. "Avers" ukuhlolwa ngumuntu kulinganiselwa isimo impahla ongaphakeme noma overpriced esenana ukufunjathiswa. Ekugcineni, ngo-2014 inkantolo igwebe Zeldin iminyaka emine ejele umbuso jikelele. Leli cala libe emphakathini elikhulu, yingakho igama Mihaila Zeldina waziwa ezweni lonke. Kodwa khumbula ukuthi le ndoda ayinakho maqondana ummeli kusukela Ekaterinburg.
Ngokuvamile, ummeli Mikhail Zeldin kungenziwa kwachazwa ngokuthi Uchwepheshe isigaba phezulu okunenjongo, okuyiwona izinto zasemsebenzini kulesigaba zokuphila imele ongaphambili.
Kodwa, kungakhathaliseki ukuthi ungakanani yakhe ngokulinganiswa ayemncane, ummeli onokuhlangabezanwe nakho Mikhail Zeldin. Ama ifotho, engaphezulu, usibonisa a unethemba okhokhelwayo. Ukuze credit wakhe kakade iwine lenqwaba amacala asezinkantolo nezinqumo ezithathwe esivuna iklayenti. Igunya iwine onzima umsebenzi onzima, kodwa kulula ukulahlekelwa, Esenze isinyathelo esisodwa nje okungalungile. Mikhail Leonidovich ngenkathi kahle singakwazi ukuhlale sibonisa idumela omunye abameli best eYekaterinburg.
Ake bathemba ukuthi main impumelelo umsebenzi Mikhail Zeldin kuseza.